ဖိုင်များကို Android တွင်ဖုံးကွယ်ရန်အကောင်းဆုံး app | Androidsis
Android မှာဖိုင်များကိုဝှက်ရန်အကောင်းဆုံး app
အကယ်၍ သင်သည်သူတို့၏ terminal တစ်ခုလုံးတွင်သက်တမ်းတစ်လျှောက်နေထိုင်ခဲ့သည့် Android အသုံးပြုသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင့်တွင်သီးသန့်ဖြစ်သောဓါတ်ပုံများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အော်ဒီယိုများသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများကဲ့သို့သောဖိုင်များရှိခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ မျက်လုံးများ ဒါဟာဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပါ အကြောင်းအရာများကိုဖုံးကွယ်ရန်အက်ပ်များ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ထုတ်ကုန်များ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပအမှတ်တရများတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ဒီနေ့ရဲ့ဗွီဒီယို post ထဲမှာ၊ ငါဟာငါ့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးမှာလဲ၊ စတိုင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြား application တွေအများကြီးကွာခြားမှုရှိတယ်။ Android မှာဖိုင်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံး app.
ကျွန်တော်ဒီကိုယနေ့အကြံပြုချင်တဲ့ application ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဆိပ်ကမ်းများမှကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောဖိုင်များ၏ privacy ကိုထိန်းချုပ်ပါ, ၏နာမကိုအမှီပြုတုံ့ပြန် application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Andrognito ၎င်းသည်အခမဲ့ရယူနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းမရှိသောအပိုအင်္ဂါရပ်များများစွာရှိသောယူရို ၄% ကျော်အတွက် PRO ဗားရှင်းကိုဝယ်ယူရန် in-app ဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်စရာရှိသော်လည်းဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်အခမဲ့ရှိသည်။
1 Andrognito ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
2 Andrognito ကအရာအားလုံးကို Android မှာဖိုင်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းပါတယ်
Andrognito ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
Andrognito - ဖိုင်များ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများကိုဖျောက်ထားပါ
Andrognito ကအရာအားလုံးကို Android မှာဖိုင်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal များတွင်လျှို့ဝှက်။ လုံခြုံသောနေရာတစ်ခုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အား Andrognito ကကမ်းလှမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသည့်မည်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမဆို encoding encrypt လုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်နိုင်သည်။
ဒီဇိုင်းပါသောလျှောက်လွှာတစ်ခုသည် Google ၏ပစ္စည်းဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်အလုပ်လုပ်သည် မည်သည့်ဖိုင် (သို့) လမ်းညွှန်ကိုမဆို encrypt လုပ်ခြင်းသည် button ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်နှိပ်ခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသည်.
AES 256 စစ်တန်းတန်းလုံခြုံရေးနှင့်အတူဖိုင် encryption ကို၎င်းသည်အလွန်မြန်ဆန်သောဖိုင်စာဝှက်ခြင်းနှင့်စာဝှက်ဖြည်ခြင်းစနစ်နှင့်အတူလျှောက်လွှာကို၎င်း၏အမျိုးအစားတွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်စေသည်။ အကယ်၍ ဤသို့ထပ်မံထည့်သွင်းပါကလုံခြုံစိတ်ချရသောသိုလှောင်မှုကဲ့သို့သောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးနှင့်ထပ်တူထပ်မံလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်၊ ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်း။ ၎င်း၏အခမဲ့ဗားရှင်းအတွက်လျှောက်လွှာကျွန်ုပ်ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသောဗားရှင်း၊ Android သုံးစွဲသူများအတွက်မလုံလောက်ပါအကယ်၍ သင်ဟာလုံခြုံရေးကိုစွဲလမ်းနေတယ်၊ ​​ဒါမှမဟုတ်အလုပ်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဒီ app မှာရှိပြီးသားပရိုဂရမ်များ၊ ပရိုဗား၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပိုတွေလိုအပ်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီအက်ပ်အတွက်ပေးရသောဗားရှင်းသည်ကုန်ကျစရိတ် ၄ ယူရို ၄ ဒေါ်လာထက်မပိုသောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်မစဉ်းစားပါ သင်တို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အဟန့်အတား
အကယ်၍ သင်သည်လျှောက်လွှာမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို၎င်းနှင့်၎င်းအားအခမဲ့ပေးထားသောဗားရှင်းတွင်ပေးထားသောအရာအားလုံးကိုသိလိုလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်သည် Android မှာဖိုင်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံး appဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးရဲ့အစမှာသင့်ကိုထားခဲ့ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပြီးဒီ application ကသင်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုထင်သလဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android မှာဖိုင်များကိုဝှက်ရန်အကောင်းဆုံး app